Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများ- အပြည့်အ၀ နစ်မြုပ်နေသော အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်ရန် လက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန် | Martech Zone
ဤခေတ်နှင့် ခေတ်ကြီးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စားသုံးသူများအနေနှင့် တတ်နိုင်သမျှ အားထုတ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် အကြောင်းအရာကို အမြန်ချေဖျက်လိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် Google သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဗားရှင်းဟုခေါ်သော အတိုချုံးအကြောင်းအရာကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Google ဝဘ်ပုံပြင်များ.
သို့သော် Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုနှစ်မြှုပ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော အတွေ့အကြုံကို မည်သို့ပံ့ပိုးပေးသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများကို အသုံးပြုပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးနိုင်သနည်း။
ဤလက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်သည် ဤဝဘ်ဇာတ်လမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့ကို မည်သို့အသုံးချရမည်ကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
Google Web Story ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများသည် အမြင်အာရုံကြွယ်ဝသော ဝဘ်အတွက် မျက်နှာပြင်အပြည့် အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး သင်ကို တို့ရန် သို့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှ နောက်တစ်ပုဒ်သို့ ပွတ်ဆွဲရန် ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် Facebook နှင့် Instagram ဇာတ်လမ်းများနှင့် အတိအကျတူသည်။ ရှိပါတယ် ဝဘ်ဇာတ်လမ်းပေါင်း သန်း 20 ကျော် စုစုပေါင်း အွန်လိုင်းနှင့် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းက၊ ဒိုမိန်းအသစ် 6,500 သည် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး ဝဘ်ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မနက်ခင်း အလုပ်သွားချိန်အတွင်း အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် စားသုံးသူများအတွက် အခြားပုံစံတစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဘော်လီရှေ့တွင် ထိုင်နေစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းပေါ်တွင် ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ လှိမ့်ဆင်းနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် Google ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြင့် သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ထံရောက်ရှိရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဘာကြောင့် Google Web Stories ကို သုံးသင့်တာလဲ။
ဒါဆို ဘာကြောင့် Google Web Stories ကို သုံးတာလဲ။ ၎င်းတို့သည် အသွားအလာ ပိုများလာစေရန်နှင့် သင့်ဝဘ်အကြောင်းအရာကို ပိုမိုမြင်တွေ့နိုင်စေရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေးစွမ်းနိုင်သော Google ရှာဖွေမှု၏ တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့ကို အစမှ ဖန်တီးရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင့်အဆင့်များကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ - Google ၏ ထိပ်တန်းစာမျက်နှာများတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ပြင်းထန်သည်။ သာ စာမျက်နှာများ၏ 5.7% Ahrefs အရ ထုတ်ဝေပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းရှာဖွေမှုရလဒ် ၁၀ ခုတွင် အဆင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများက သင့်အား ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ပထမအဆင့်သတ်မှတ်ရန် အခွင့်အရေးပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Google ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကို Search Engine Result စာမျက်နှာများတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည် (SERP များ) ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသွားအလာများလာကာ အရောင်းပိုလာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
အကြောင်းအရာကို အလွယ်တကူ မျှဝေနိုင်သည်။ - Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများ၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ အကြောင်းအရာကို အွန်လိုင်းတွင် သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့် အလုပ်ဖော်များနှင့် အလွယ်တကူ မျှဝေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုစီသည် မျှဝေခြင်းကို မနှိပ်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန်မလိုဘဲ အသုံးပြုသူ အလွယ်တကူ မျှဝေနိုင်သည့် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အကြောင်းအရာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အများဆုံးရောက်ရှိမှုကိုပေးသည်။ - Google ဝဘ်ပုံပြင်များသည် မိုဘိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်များကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Instagram နှင့် Facebook ဇာတ်လမ်းများ နှစ်ခုလုံးနှင့် ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ WordPress ဝဘ်ဆိုဒ်များအပြင် အခြားသော ပေါင်းစပ်ထားသော အပလီကေးရှင်းများသို့ ဇာတ်လမ်းများ ဖန်တီးကာ ပေါင်းထည့်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းများကို လူအနည်းငယ်မျှသာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ကို ကလစ်နှိပ်ရန် သန်းပေါင်းများစွာအတွက် ရနိုင်သော ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ပြသထားသည်။
Search Engine Optimization အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (SEO ဆိုသည်မှာ) ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားသောအခါတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လုပ်ငန်းများစွာအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အွန်လိုင်းစျေးကွက်၏ 70% အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုသည် ရောင်းအားဖန်တီးရန်အတွက် အခပေးရှာဖွေခြင်းထက် ပိုကောင်းသည်ဟု ပြောပါ။ Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများသည် Google Search တွင်သာမက Google Images နှင့် Google App တို့မှ အဆင့်သတ်မှတ်မည့် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများကို ငွေရှာနိုင်ပါသည်။ - Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများသည် မျက်နှာပြင်အပြည့်ကြော်ငြာများနှင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များအကူအညီဖြင့် ထုတ်ဝေသူများကို ငွေရှာရန် အခွင့်အရေးပေးသည်။ ကြော်ငြာရှင်များသည် ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် ပိုမိုမြင်သာသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ၎င်းမှလည်း အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းပြောပြ.
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ခြေရာခံပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာပေးသည်။ - ဤအကြောင်းအရာအမျိုးအစားအားဖြင့်၊ ထုတ်ဝေသူများသည် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို အလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ထုတ်ဝေသည့်ဇာတ်လမ်းတိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အချက်အလက်စုဆောင်းရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည့် Google Analytics ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
သင့်အသုံးပြုသူများအတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး နှစ်မြှုပ်ထားသော အတွေ့အကြုံကို ပေးပါသည်။ – Google ၏ ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများ၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းသည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် နစ်မြုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ဝေသူကို သင့်ပရိသတ်များအကြောင်း ပိုမိုပြောပြနိုင်သည့် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများနှင့် စစ်တမ်းများကဲ့သို့သော အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်သွင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးသည်။
Google Web Stories ကို ဘယ်မှာတွေ့လဲ။
၎င်းတို့၏ ရှာဖွေမှုစာမျက်နှာများ၊ Google Discover သို့မဟုတ် Google Images များပေါ်တွင် Google ပေါ်ရှိသည့်အခါ ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများကို US၊ အိန္ဒိယနှင့် ဘရာဇီးလ် သုံးစွဲသူများအတွက် လောလောဆယ်တွင်သာ မြင်တွေ့နိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရောက်မချင်း အချိန်တစ်ခုပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် ထိုနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံ၌ရှိရန် ကံကောင်းပါက၊ သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များအစတွင် ၎င်းသည် ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အလွယ်တကူရနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကိုရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲမရှိပါ။
Google Web Stories ဖန်တီးနည်း။
ဝဘ်ဇာတ်လမ်းဖန်တီးခြင်းသည် သင့်အား ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများစွာရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းအင်္ဂါရပ်ပါရှိသော ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့ပင်၊ တစ်ခုဖန်တီးရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ဤသည်မှာ သင်၏ပထမဆုံး ဝဘ်ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးရာတွင် သင်ကိုးကားနိုင်သော အကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။
ရုပ်မြင်သံကြားတည်းဖြတ်မှုကို အသုံးပြုပါ။ - ဝဘ်ပုံပြင် WordPress ပလပ်အင် စတင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို စိတ်ကူးယဉ်ပါ။ - storyboard တစ်ခုဖန်တီးပြီး အကြောင်းအရာအတွက် သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များ သို့မဟုတ် ပန်းတိုင်များကို မှတ်သားထားပါ။
ဝဘ်ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးပါ။ - သင့်ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုဆွဲယူပြီး ဇာတ်လမ်းကို မှတ်တမ်းတင်/ စုစည်းကာ ဖန်တီးရန် ရုပ်မြင်သံကြားတည်းဖြတ်သူကို အသုံးပြုပါ။
ဝဘ်ဇာတ်လမ်းကို ထုတ်ဝေပါ။ - ဇာတ်လမ်းကို Google တွင်ထုတ်ဝေပြီးအသွားအလာကိုကြည့်ရှုပါ။
Google Web Stories နမူနာများ
သင့်တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင့်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် လှုံ့ဆော်မှု၏ အစပျိုးဘုတ်တစ်ခုရှိရန် Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းနမူနာအချို့ရှိရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ ဤသည်မှာ သင့်အား စတင်ရန် ဥပမာအချို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုဖွင့်ရန် နှိပ်ပါ။
VICE သည် အထက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း quarantine ချက်ပြုတ်သည့်စီးရီးဖြင့် အိမ်မှချက်ပြုတ်သူများကို ကပ်ရောဂါထံမှ လှုံ့ဆော်မှုရယူခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုသာ မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သော လူဦးရေစာရင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် နည်းလမ်းကောင်း။
ရှာဖွေသူသည် သိပ္ပံပညာကို မျှဝေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဤဝဘ်ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း အသုံးပြုထားသော ရုပ်ပုံနှင့် စာသားများသည် အလွန်အမင်း မလျော့သွားပေ။ ၎င်းတို့၏ သိချင်စိတ်ကို ကျေနပ်စေရန် ၎င်းကို ကလစ်နှိပ်ရန် ပိုများသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အထက်ပါ ဝဘ်ဇာတ်လမ်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးသော နိုင်လွန်၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်သည် သုံးစွဲသူများအတွက် အမြင်ရှုထောင့်မှသာမက တန်ဖိုးများကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
Google ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများ၏ အင်္ဂါရပ်များသည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော နည်းလမ်းသစ်ဖြင့် အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် စားသုံးသူ၊ ထုတ်ဝေသူ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာသူဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်း၏ဝဘ်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည့် Google ၏ နစ်မြုပ်နေသောပုံပြင်ပြောဖော်မတ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသည်။
Tags: အကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက်googe web ဇာတ်လမ်းgoogleဂူဂဲလ်ဝဘ်ပုံပြင်များgoogle web ဇာတ်လမ်းအပြန်အလှန်တုန့်ပြန်သောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံပြင်ပြောခြင်း။အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးseoserpမျှဝေပါအကြောင်းအရာလူမှုရေးအကြောင်းအရာဇာတ်လမ်းပြောခြင်းဇာတ်လမ်းပြောပြခြေရာခံခြင်းဝဗ်ပုံပြင်များဝဘ်ဇာတ်လမ်းWordPresswordpress plugin ကို